Sunday June 02, 2019 - 22:22:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hey'adda Hormuud Telecom Foundation ayaa maanta deeq lacageed u qeybisay 300 oo Qoys oo ka tirsan Jaaliyadda Yemen ee ku nool magaalada Muqdisho.
Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay Hotelka Shaamow ayaa 300 oo qoys oo dan yar waxaa lagu guddoonsiiyey lacag dhan $100 (Dollar) qoys kasta.
Madasha lagu qeybinayay deeqdan ayaa waxaa ku sugnaa madax ka tirsan Shirkadda Hormuud iyo Hay’adda Hormuud Foundation oo deeqda qeybinayay dadka la siinayay deeqdan iyo marti kale.
Cabdi Cali Maxamed oo ku hadlayay magaca Shirkadda Hormuud ayaa sheegay in talaabada qeybinta deeqdan ay tahay mid lagu caawinayo dadka nugul ee baahiyaha qaba kuwasi oo ku nool Muqdisho iyo gobolada dalka.
Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah maamulaha guud ee Hay’adda Hormuud Foundation ayaa sheegay in Hay’adda Hormuud Foundation mar walba u taagan tahay sidii ay u caawin lahayd dadka noocan oo kale ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in tani ay qeyb ka tahay howlaha hay’adda ay ka wado Muqdisho iyadoo sidan oo kale ay sanad walba shirkadda u qabato barnaamijyada caawinaada dadka tabaaleysa.
Ibraahim Saalax Deefullah oo ka mid ahaa Baarlamaankii hore ee Soomaaliya oo isu keenida dadka door ku lahaa ayaa madaxda hay’adda Hormuud ku tilmaamay in ay il-gaar ah u leedahay dadka cawinaada u baahan ee ku nool magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka maanta la siiyay deeqdan dhaqaale ayaa u mahad celiyay madaxda Hay’adda hormuud iyagoo tilmaamay in qeybinta deeqdan lagu soo beegay xili ay dadkan u baahnayeen madaama diyaargarowga ciida ku guda jiraan.
Sanad walba sidan oo kale ayaa Hay’adda Hormuud Foundation waxaa ay deeqaha caawinaada gar-gaarka ay sidan oo kale uga fulisa degmooyinka gobalka Banaadir iyo Qaar ka mid ah gobolada dalka.